1 Samueri 24 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Samueri 24:1-22
24 Zvino Sauro paakangodzoka pakutevera vaFiristiya,+ vakauya vachimuudza, vachiti: “Tarirai! Dhavhidhi ari murenje reEni-gedhi.”+ 2 Sauro akatora varume zviuru zvitatu+ vakasarudzwa pavaIsraeri vose, akaenda kunotsvaka Dhavhidhi+ nevarume vake pamusoro pematombo asina chinhu embudzi dzomumakomo.+ 3 Akazosvika pamatanga emakwai ematombo aiva pamugwagwa, paiva nebako. Naizvozvo Sauro akapinda kuti azvibatsire,+ Dhavhidhi nevarume vake pavakanga vari mumativi ebako+ ari shure shure, vakagara pasi. 4 Varume vaDhavhidhi vakatanga kuti kwaari: “Herino zuva iro Jehovha anoti kwamuri, ‘Tarira! Ndiri kuisa muvengi wako muruoko rwako,+ muitire zvingava zvakakunakira.’”+ Naizvozvo Dhavhidhi akasimuka, akacheka kumupendero kwejasi raSauro risina maoko chinyararire. 5 Asi pashure paizvozvo hana yaDhavhidhi yakaramba ichimutongesa+ nokuti akanga acheka kumupendero kwejasi risina maoko raSauro. 6 Nokudaro akati kuvarume vake: “Handingambofungi zvakadaro, mukuona kwaJehovha, kuti ndiitire ishe wangu, iye muzodziwa+ waJehovha, chinhu ichi, nokutambanudzira ruoko rwangu kwaari, nokuti iye muzodziwa waJehovha.”+ 7 Naizvozvo Dhavhidhi akaita kuti varume vake vapararire nemashoko aya, uye haana kuvabvumira kuti vamukire Sauro.+ Asi Sauro, akasimuka mubako, akaramba achienda. 8 Zvino pashure paizvozvo Dhavhidhi akasimuka, akabuda mubako, akashevedzera ari shure kwaSauro, achiti: “Ishe wangu+ mambo!” Sauro akatarira shure kwake, Dhavhidhi akakotama chiso chake chakatarira pasi+ uye akagwadama. 9 Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Nei muchiteerera mashoko evanhu,+ pavanoti, ‘Tarirai! Dhavhidhi ari kutsvaka kukukuvadzai’? 10 Tarirai nhasi maziso enyu aona kuti Jehovha akuisai sei muruoko rwangu mubako zuva ranhasi; uye mumwe munhu ati ndikuurayei,+ asi ndakunzwirai tsitsi ndikati, ‘Handisi kuzotambanudzira ishe wangu ruoko rwangu, nokuti iye muzodziwa+ waJehovha.’ 11 Baba vangu+ onai, chokwadi, onai mupendero wejasi renyu risina maoko uri muruoko rwangu, nokuti pandacheka mupendero wejasi renyu risina maoko handina kukuurayai. Zivai uye onai kuti hapana chakaipa+ kana kuti kumukira muruoko rwangu, uye handina kukutadzirai, asi imi muri kuvandira mweya wangu kuti muuuraye.+ 12 Jehovha ngaatonge pakati pangu nemi;+ uye Jehovha achanditsivira+ kwamuri, asi ruoko rwangu harusi kuzova pamusoro penyu.+ 13 Sezvinotaura chirevo chevanhu vekare kuti, ‘Zvakaipa zvichabuda kune vakaipa,’+ asi ruoko rwangu harusi kuzova pamuri. 14 Mambo waIsraeri abuda kuzotevera ani? Muri kudzingirira ani? Imbwa+ yakafa here? Nhata+ imwe chete here? 15 Jehovha achava mutongi, achatonga pakati pangu nemi, achaona ondireverera mhosva+ yangu uye achanditonga kuti andisunungure paruoko rwenyu.” 16 Panguva yakapedza Dhavhidhi kutaurira Sauro mashoko aya, Sauro akati: “Inzwi rako here iri, mwanakomana wangu Dhavhidhi?”+ Sauro akatanga kuchema kwazvo, akasvimha misodzi.+ 17 Akati kuna Dhavhidhi: “Wakarurama kundipfuura,+ nokuti wakandiitira zvakanaka,+ asi ini ndakakuitira zvakaipa. 18 Uye iwe—nhasi iwe wataura zvakanaka zvawandiitira pakuti Jehovha andiisa muruoko rwako+ asi hauna kundiuraya. 19 Zvino kana munhu akawana muvengi wake, angamurega achienda nenzira yakanaka here?+ Naizvozvo Jehovha achakupa mubayiro wezvakanaka,+ nokuti nhasi wazviita kwandiri. 20 Zvino tarira! ndinonyatsoziva kuti, chokwadi, uchava mambo,+ uye kuti umambo hwaIsraeri hucharamba huri muruoko rwako. 21 Zvino ndipikire naJehovha+ kuti hauzoparadzi vana vangu vanonditevera uye kuti hauzotsakatisi zita rangu muimba yababa vangu.”+ 22 Naizvozvo Dhavhidhi akapikira Sauro, Sauro achibva aenda kumba kwake.+ Asi Dhavhidhi nevarume vake, vakaenda kunzvimbo yakaoma kusvika.+
1 Samueri 24